FIRE SAGA NETFLIX: EUROVISION ရုပ်ရှင်မှအကျော်ကြားဆုံးအချိန် ၁၇ ခု - သတင်း
ငါ Netflix ရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်း Eurovision ရုပ်ရှင်, The Story of Fire Saga ကိုကြည့်နေခဲ့ 17 အတွေးများ
Netflix ဟာသူ့ရဲ့ Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်ကိုထုတ်လွှင့်လိုက်ပြီ။ ထိုအခါတ ဦး တည်းအရာဖြောင့်ရကုန်အံ့: ဒါဟာအခွံမာသီးပါပဲ။
အဆိုပါရုပ်ရှင်သူတို့လာသကဲ့သို့ unhinged ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ငါအဖြစ်ဝေးလျှင်ဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဖြစ် Eurovision သီချင်းပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ခြင်းထက်စောင့်ကြည့်ထက်နည်းတူကောင်းပါတယ်လျှင်မကောင်းသည်ဟုပြောသကဲ့သို့ငါသွားချင်ပါတယ်။ နှစ် ဦး စလုံးအညီအမျှအရူးဖြစ်ကြပြီးသင်ကမ္ဘာကြီးကိုမေးခွန်းထုတ်စေ။
Netflix ပေါ်ရှိ Eurovision သီချင်းပြိုင်ပွဲ - The Story of Fire Saga ကိုကြည့်ရှုရင်းသင်စိတ်ထဲဖြတ်သန်းသွားသောထူးဆန်းသောအတွေးများအားလုံးဤတွင်ပါ။
1. ပထမ ဦး စွာရဲ့သူတို့အား ACCENTS ဖြေရှင်းကြကုန်အံ့
အိုက်စလန်အသံထွက်များကြိုးစားနေသည့်ရာခေလမက်ခ်ဒမ်စ်နှင့် Will Ferrell တို့နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ချိန်အထိကျွန်ုပ်အာရုံမစိုက်နိုင်ပါ။ အဆိုးဆုံးဝေးနေဖြင့်ပီယပ် Brosnan ရဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်ချစ်လှစွာသောသခင်ကအလွန်အာရုံဖြစ်ပါတယ်။
အစကတည်းကငါမသက်မသာဖြစ်၏ ငါဒီကိုမြင်လျှင်ပြီးနောက်ငါခံစားရပုံကိုမသိရပါဘူး။ သရဲ။
3. ရာခေလသည် McAdams ၏ casting ထူးဆန်းတဲ့ပုံရသည်, ဒါပေမယ့်ငါကဒီမှာပါပဲ
Rachel McAdams သည်အမြဲတမ်း Regina ဂျော့ခ်ျ (သို့) Allie အဖြစ်မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှပါ ၀ င်မည်။ slapstick ဟာသတွင်သီဆိုနေသောအိုက်စလန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတီးမှုတ်မည်။
(၄) Demi Lovato ဟာခဏတစ်ဖြုတ်ဝင်လာတယ်
Demi Lovato သည်အိုက်စလန်အတွက်အသံညှိထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ရခြင်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ သို့သော်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူမသည်လွင့်မျောနေပြီး Sigrit နှင့် Lars များ၏ရှေ့မှောက်၌ကြမ်းပြင်ပေါ်ရှိသူမ၏လောင်ကျွမ်းနေသောလက်မောင်းသည် ဒီဟာတကယ်လိုအပ်တဲ့ Netflix လား။
၅။ Sigrit ဟာ elves တွေကိုယုံကြည်တယ်၊
သူမ၏စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုနှင့်ဝက်ဝံဖောင်းသံတို့က elf အိမ်ငယ်သုံးခုဘေးတွင်ဝီစကီမှထွက်ခွာကာ Fire Saga ကို Eurovision Song Contest သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
၅။ Edinburgh ပန်းခြံသည်ထူးဆန်းသောခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်အပိုင်းအစတစ်ခုနှင့်တူသည်
Sigrit နှင့် Lars တို့ကို Edinburgh တောင်ကုန်းများသို့ဥယျာဉ်တစ်ခုသို့လမ်းလျှောက်လိုက်သည်နှင့်လူတိုင်းသည် ဦး ထုပ်များ၊ ပဝါများနှင့်ပတ်ရစ်နေစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဤရုပ်ရှင်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းပြီး Hallmark ဂန္တ ၀ င်ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကဲ့သို့ဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။
- Netflix UK နှင့်အိုင်ယာလန် (@NetflixUK) ဇွန်လ 27, 2020
အလက်ဇန်းဒါးကဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ၀ င်ခွင့်သည်တကယ်ကောင်းသည်ဟုပြောသော်လည်းလူတိုင်းသည်ဗြိတိန်ကိုမုန်းသည်။ ထို့ကြောင့်သူမသုညရလိမ့်မည်။
ငါသည်လည်းဒါ Edinburgh အိမ်ရှင်မြို့ဖြစ်ခြင်းရုပ်ရှင်တပြင်လုံးကိုအံသွား၌အနိမ့်သော့ချက်သည်ကပြောသည်ရန်လိုအပ်ပါသည်ထင်ပါတယ်။ ဒါကယူကေကို Eurovision Song Contest မှာကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အိမ်ရှင်အဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့အခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအတွက်အကြံပြုတာဖြစ်လို့ပါ။ ဖြစ်ပျက်သွားဘယ်တော့မှမထဲမှာပွတ်ပေးပါ။
THE EUROVISION ကင်မရာတောင့်။ ဒီဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးက Disney Channel ရုပ်ရှင်ကနေလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါနင့်အတွက်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာပဲ။ ငါတကယ်ဒါကလာမယ့် Eurovision အတွက်မိတ်ဆက်ဗီဒီယိုဖြစ်ခြင်း။ အထင်ကရ။
INJECT ။ အိုင်တီ
8. မြေတပြင်လုံး '' လိင်အခွံမာသီး '' မြင်ကွင်းတစ်ခုအတွေးများအတွက်လောင်စာဖြစ်ခဲ့သည်
ဒီဖြစ်ပျက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်မသေချာပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Sigrit နဲ့ Lars တို့ဟာသူတို့ဟာလိင်အခွံမာသီးသွားပြီးစတူဒီယိုထဲမှာလူတိုင်းကိုလှောင်ပြောင်သွားမယ်လို့အော်ဟစ်နေတဲ့မြေကွက်ကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါအရေးကြီးတဲ့ဇာတ်ကောင်တိုးတက်မှုလိုခံစားခဲ့ရတယ်။
သူတို့ကဒီအမှတ်ပြီးနောက်ဆက်စပ်ဖြစ်လာသည်တူသောငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့လည်းဒီကူးစက်ရောဂါထဲမှာမှီဝဲနေနဲ့တူငါတကယ်ခံစားရတယ်။ ယောက်ျားတွေ၊ ထွက်ကြစို့။
9. အိုကေယခုငါတို့သေပြီ Demi Lovato မြင်နေပါတယ်?
ထူးဆန်းတဲ့ဖြည့်စွက်ချက် ငါမမြင်ဘဲငါ့ဘဝမှာနေထိုင်နိုင်တယ်လို့ငါထင်တယ် ရဲ့အဲဒီမှာစွန့်ခွာကြပါစို့။
၁၀။ ဂရေဟမ် Norton ထွက်လာပြီးအခုရုပ်ရှင်ကအရမ်းနာကျင်နေတယ်
ရုပ်ရှင်၏ Eurovision အပိုင်းများသို့သင့်လျော်လာသောအခါဂရေဟမ်က Norton သည်သူ၏အသံကိုသေချာပေါက်ပေးနေပါသည်။ မုသားစကားလုံးမရှိ၊ သင်ကဒီရုပ်ရှင်ကားကိုမေ့လိုက်ပြီးဂရေဟမ်သည်သူတို့၏ရူးသွပ်သောသီချင်းများကိုဖျော်ဖြေသည့်ထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်ရပ်များထဲသို့ထိုးဖောက်နေသည်ကိုကြည့်နေသည်ဟုသင်ထင်နေသည်။ ဒီနှစ် Eurovision ကိုတကယ်ပယ်ဖျက်ခဲ့သလား။ ဒါမှမဟုတ်ငါအခုကြည့်နေတာလား။
၁၁။ သူတို့ပြလုပ်နေတာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ Double Trouble ကကျွန်တော့်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်စေချင်တာလား။ !
ဒါဟာ bop ပါပဲ။ ငါကပြောသည်။
Sigrit သည်သူမလက်၌အချိုရည်နှစ်ခွက်အမြဲရှိနေစေရန်သေချာစွာသူတို့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပုံကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည် Sigrit တစ်နည်းနည်းဖြစ်ကြသည်။
၁၃။ ယေဘုယျအားဖြင့် Lars သည်ကြီးမားသောဒစ်တစ်ခုဖြစ်သည်
သငျသညျဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျဒီတစ်ခုလုံးကိုရုပ်ရှင်တစ်လျှောက်လုံး Lars မုန်းရန်, တကယ်ဂရုမစိုက်မဟုတ်ကနေမသွားနိုင်ပါ။ သူဟာတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူဖြစ်ပြီး Sigrit ကို shit လိုဆက်ဆံတယ်။ သူကဘာမှသူကလိုလားလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, စာသားသူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မီးတောက်၌တက်တတ်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ် - သူကနောက်ဆုံးမိနစ်ပဝါပြောင်းလဲသွားတယ်နှင့် Sigrit ရုံဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူး !!! ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကသူ့ကိုဖုန်းဆက်ပါ
၁၄။ ဒီကောင်လေးဘာကြောင့်ထူးခြားရတာလဲ။ ပြီးတော့ဘာလို့သူသေရတာလဲ ???
ဤမြင်ကွင်းသည်ဤရုပ်ရှင်၏ slapstick ဆောင်ပုဒ်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ?! ဤမြင်ကွင်းသည်အမှန်ပင်… ထိတ်လန့်စရာလား! ထိုအထိပ်ကိုချွတ်ရန်, က fuck ဆိုတဲ့ elves တွေဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်း၏သောသူတို့အား elves တွေကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
15. အဆိုပါကားမြင်ကွင်းတစ်ခုငါဖြစ်နိုင်သည်အစဉ်အမြဲငါတွေ့မြင်အများဆုံး melodramatic နှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ရိုင်းအရာဖြစ်ခဲ့သည်
ဒီမြင်ကွင်းအတွက်ခေါင်းစဉ်ငယ်များသည်တစ်ချက်တစ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Will Ferrell သည် Edinburgh လမ်းများတစ်လျှောက်ပြင်းထန်သောကားတစ်စီးကိုဖြတ်သန်းနေစဉ်ရုရှားဂီတသည်ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ အားလုံးအစိမ်းရောင် mini ကို။ စဉ်းစားကြည့်။ သူပြုသောအမှုဖွင့်ပြီးနောက်, ငါနိမ့်သော့ချက်ပင်သူ့ကိုလုပ်ချင်ကြဘူး။
၁၆။ ရုရှား။ ခံထိုက်။ နောက်ထပ်။
ငါသူက x ပျော်ရွှင်ရဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်
ငါပြောမယ်လို့ငါမထင်ခဲ့ပေမဲ့ရုရှားကအလက်ဇန္ဒားကဒီထက်ပိုပြီးထိုက်တန်ပါတယ်။ သူကလိင်တူချစ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလို Sigrit ကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသော်လည်းသူမသည်ကြီးမားသော ol 'shit head Lars ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးအတွက် Alexander အားရည်ရွယ်ချက်အချို့ရှိရန်ကျွန်တော်စောင့်နေခဲ့သော်လည်းသူသည်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးမမျှတဘူး
ဒေါသထွက်နေဆဲက Alexander မဟုတ်ပေမယ့်သေချာတာပေါ့၊ Netflix ရုပ်ရှင်မှာ Fire Saga ရဲ့အဆုံးသတ်ကအနည်းဆုံးတော့အတော်လေးပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူစင်မြင့်ပေါ်ထွက်လာသည့်အခါပရိသတ်များရှိအမေရိကန်များနှင့်သင်အော်ငိုသည်ကိုကြည့်နေသည့် Lars ၏အဖေပင်လျှင်
* Jaja Ding Dong တွင်ထပ်မံကစားသည် *
Eurovision သီချင်းပြိုင်ပွဲ - ပုံပြင်မီး Saga သည် Netflix တွင်ယခုပင်ရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Netflix ၏သတင်းများ၊ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုများနှင့်မှတ်တမ်းများအတွက် Facebook ပေါ်မှာ Netflix ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းလိုပဲ။
• Netflix Eurovision ရုပ်ရှင်မှာဘယ်သူတွေသီဆိုနေတာလဲ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု
• Dead To Me နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်း ၁၂ ခုကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ညအချိန်၌အိပ်နိုင်အောင်အရေးတကြီးဖြေကြားရန်လိုအပ်သည်
• Netflix ရှိ Tiger King မှထူးဆန်းသောမေးခွန်း ၁၆ ခုကသင့်ကိုချန်ထားခဲ့သည်
ကျွန်းသြစတြေးလျရာသီ 1 ဆုရှင်ကိုချစ်